Ukuhlawulwa kwezonyango kunye nokufaka iikhowudi kufuna abaqeqeshi bezempilo abanobuchule kwi-IT kwaye banezinga eliphezulu lokujonga iinkcukacha. Kungenxa yokuba bajonga kwakhona idatha yesigulana ukugqibelela kunye nokuchaneka, isitshixo kulwazi kulwazi, kunye nenkqubo yentlawulo.
Ezi ngcali zinokufumana imfundo kunye noqeqesho olufunekayo ukuze ugqwese kwi-intanethi kodwa ayizi ngexabiso eliphantsi. Ke, eli nqaku liza kukunika iinkcukacha zeendleko eziphezulu zeendleko zonyango kunye nokubhalwa kweekhowudi kwi-intanethi. Uya kufunda kwakhona malunga ne-intanethi yentlawulo yezonyango kunye nezikolo zekhowudi ezibonelela ngenkxaso-mali yokufunda, intlawulo yonyango efikelelekayo kunye nokufaka iikhowudi kwizikolo ezikwi-Intanethi, kunye nezifundo zasimahla zentlawulo yezonyango kunye neekhowudi. Ngelixa usesikolweni kufuneka fumana CDI epokothweni guide ukukunceda ukuba wenze ikhowudi ngokuchanekileyo.
Jonga uluhlu lwemixholo engezantsi ukujonga amanqaku aphambili kweli nqaku.
Yintoni intlawulo yezonyango kunye nekhowudi?
Yintoni indleko zokuhlawula iindleko zonyango kunye nokuqinisekiswa kweekhowudi?
Ndingasifumana njani isatifikethi sokuhlawula kunye nokufaka iikhowudi?
ISatifikethi okanye iNkqubo yeDiploma
Ukuhlawulwa kweZonyango okuqinisekisiweyo kunye nokufakwa kweKhowudi kwiZikolo ezikwi-Intanethi ngoncedo lwezeMali
Ikholeji yaseCambridge yezeMpilo kunye neTekhnoloji
Iikhowudi ezisezantsi zeNdleko zokuKhowuda kunye neNkqubo yokuTyala kwi-Intanethi
Ikholeji yokuwa kweNgcali yeOconee
Ikholeji yobuGcisa yaseOgeechee
Ukuhlawulelwa kwasimahla kwiikhosi kunye neekhosi zokufaka iikhowudi
Yintoni iKhowudi yokuNyanga kunye nokuBiza?
Funda ukuhlawulwa kwezonyango ngeYure enye
Ukuhlawulwa kweeNtlawulo eziPhezulu kunye neKhowudi kwiKhosi yeKhosi yeNdleko
Ikholeji yobuGcisa boMntla
Uluntu lwaseMinnesota State kunye neKholeji yobuGcisa
ILamamie County Community College
IYunivesithi yaseKeizer-Ft Lauderdale
KwiKholeji yoLuntu yaseGuilford
Indawo yaseHazard kunye neKholeji yobuGcisa
Urhulumente waseNorth and Technical College
Ummandla weMetropolitan Community College
UMzantsi-ntshona weWisconsin yobuGcisa
Rochester Community kunye neKholeji yobuGcisa
KwiKholeji yoLuntu yaseHighland
I-Indian Hills Community College
Ukuhlawula iindleko zonyango kunye nokufaka iikhowudi kubandakanya ukuqaphela ukuxilongwa, iimvavanyo zonyango, unyango, kunye neenkqubo eziqulathwe kumaxwebhu ezonyango kwaye uphinde wenze le datha yesigulana kwiikhowudi ezisemgangathweni ukuhlawulisa urhulumente kunye nabahlawuli bezorhwebo kwimbuyekezo yogqirha.
Ngamagama alula, ukuhlawula iindleko zonyango kunye nokufaka iikhowudi yinkqubo yokuthumela ulwazi kwiinkampani zeinshurensi nasekuqhubeni iintlawulo zezigulana.
Nanini na xa isigulana sifumana iinkonzo zonyango, ikhowudi yezonyango ithatha ifayile yesigulana kwaye iguqulele iinkonzo kwiikhowudi zehlabathi jikelele zeenkampani zeinshurensi. Nje ukuba inkampani yeinshurensi ifumane ezi khowudi, abatyali bezonyango banxibelelana nesixa esityala isigulana kunye nenkampani yeinshurensi ngetyala. Ngamanye amaxesha, amatyala ahamba ngohlobo lweeleta ezibonakalayo okanye ii-imeyile.
Iindleko zokufumana isatifikethi sokuhlawula iindleko zonyango kwi-intanethi ngu $749. Ukuba unqwenela ukufundisisa kurhwebo lwasekhaya ukuze ufumane isatifikethi, kuya kubiza phakathi I-1,000 ne-$ 2,500. Kwelinye icala, ukulandela inkqubo yokunxibelelana nonyango kunye neekhowudi kwikholeji eyamkelweyo kuya kuba neendleko $ 8,000 ku $ 19,000.
Ukufumana ityala lokuhlawula kunye nokufaka iikhowudi kuvula umnyango kumathuba aliqela afana nomvuzo ophakamileyo okanye amathuba angcono emisebenzi kuwe ngaphandle kwabantu ngaphandle kwesiqinisekiso.
Ukufumana isatifikethi kulo msebenzi, inyathelo lokuqala kukulandela inkqubo yokuhlawula kunye neekhowudi kwiziko elamkelweyo. Nangona kunjalo, abanye abantu banokukhetha indlela yemveli yokufumana isatifikethi kwi-intanethi.
Apha ngezantsi kukho iindlela zokufumana intlawulo yonyango kunye nesatifikethi sokufaka iikhowudi:
Indlela yokuqala eya ekufumaneni isatifikethi sokuhlawula kunye nokufaka iikhowudi kukufumana isatifikethi okanye inkqubo yediploma. Zombini iinkqubo ziyahluka. Iinkqubo zesatifikethi zinokugqitywa ngexesha elifutshane kwaye zineekharityhulamu ezithintelayo ngakumbi ngelixa iinkqubo zediploma zineekharityhulamu ezibanzi.
Abafundi abanqwenela ukungena kubasebenzi ngokukhawuleza banokukhetha inkqubo yesatifikethi.
Iindleko zale nkqubo zisusela kwi- $ 800 ukuya kwi- $ 4,500.
Ukulandela inkqubo enxulumene nesidanga kulawulo lonyango kuya kukucwangcisela intlawulo yezonyango kunye nokuqinisekiswa kwekhowudi. Nangona ibiza kakhulu kunesatifikethi okanye inkqubo yediploma, inkqubo yedigri enxulumene nayo ikhethwa ngabaqeshi.
Ukongeza, izatifikethi zobungcali kubandakanya noVavanyo lweeNgcali zezeMpilo eziBhalisiweyo kunye nesatifikethi semfundo esiqinisekisiweyo seebhilidi sifuna ukuba abaviwa babenenqanaba lokudibana.
Ukuba unesidanga sokudibana kulawulo lonyango, unokufaka iikhredithi ekuqhubekeni isidanga sebhatshela.
Iindleko zedigri yokudibanisa isusela kwi- $ 6,000 ukuya kwi- $ 13,000 kwaye kuthatha iminyaka emibini (2) ukuyigqiba.
Ngokufumana isidanga se-bachelor kulawulo lolwazi lwezempilo okanye kulawulo lonyango, kuya kukunika umda ngelixa uqhubeka nomsebenzi wokuhlawula kunye nokwenza iikhowudi. Oku kuyakukunika imfundo ebanzi noqeqesho olufunekayo ukuze ugqwese ebaleni.
Kuthatha malunga neminyaka emine ukugqibezela inkqubo kwaye iindleko zenkqubo ziphakathi kwe- $ 36,000 ukuya kwi- $ 120,000.
Umzimba onje I-AAPC ubonelela ngezifundo zoqeqesho kubafundi abanqwenela ukuhlala kuvavanyo lwezonyango kunye neemviwo zokufaka iikhowudi. Ezi zifundo zithathwa ikakhulu kwi-Intanethi. Ziyilelwe abafundi abanqwenela ukuba ziikhowudi eziqinisekisiweyo (CPC), iikhowudi ezigunyazisiweyo zonyango lwangaphandle (COC), okanye iikhowudi eziqinisekisiweyo zezigulana ezingalaliswayo (CIC).
Ngenye indlela, abafundi banokufikelela kwizifundo ze-AAPC kulungiselelo lwasekhaya lokufundela kwindawo abahlala kuyo.
Abafundi abathatha iikhosi ze-AAPC kwaye bapase iimviwo zokuqinisekiswa banokufumana isatifikethi kunye nemisebenzi ekhuselekileyo besebenzisa isatifikethi. Banokukhetha ukufumana isidanga esiphakamileyo ebaleni ngokulandela isidanga okanye isidanga sebhatshela ngenkqubo eyamkelweyo.
Abafundi abanqwenela ukufumana imfundo noqeqesho kwintlawulo yezonyango kunye nekhowudi abanokundwendwela ikhampasi kuphela kodwa banokufumana imfundo kwi-Intanethi. Ezi zikolo zikwi-Intanethi zivunyiwe kwaye ezinye zazo zibonelela ngoncedo lwezezimali kubafundi abangenayo inkxaso-mali.
Ke ngoko, ukuhlawulwa kwezonyango kunye nokufaka iikhowudi kwizikolo ezikwi-Intanethi ezibonelela ngoncedo lwezezimali kubafundi babo kubandakanya:
Isikolo sokugqibela sezoNyango
Ikholeji yaseCambridge yezeMpilo kunye neTekhnoloji liziko labucala lenze inzuzo emva kwesekondari eDelray Beach, eFlorida.
Iziko lilungiselela abafundi ikhondo eliyimpumelelo kwi ukhathalelo lwempilo kwaye ezobuchwepheshe amashishini ngokubanika intlawulo yonyango kwi-Intanethi kunye neenkqubo zokufaka iikhowudi. Ukongeza, isikolo sinikezela ngamashumi amabini (20) izatifikethi zokufaka iikhowudi kwiikhowudi ezinamava.
Ikholeji yaseCambridge yezeMpilo kunye neTekhnoloji ibonakala njengesinye sezikolo ezibonelela ngezifundo kubafundi babo. Amanani abonisa ukuba malunga 70 ekhulwini yabafundi kwiziko bafumana uncedo lwezemali.
IYunivesithi yaseDeVry iyunivesithi yabucala eyenzela inzuzo eyasekwa ngo-1931.
Iyunivesithi ibonelela ngeentlawulo zokuhlawula kunye neekhowudi kwi-intanethi. Apha, abafundi bafumana amava-ngamava kwiilebhu zenyani basebenzisa iirekhodi zobomi bokwenyani.
Kwinqanaba lesidanga sokuqala, iyunivesithi ibonelela ngovavanyo lwe-AHIMA lweCCS kubafundi. Ngesi satifikethi, abafundi abaphumeleleyo banokuqhubela phambili ekuqhubekeni nenxulumano okanye inkqubo yesidanga sokuqala eyunivesithi.
Kwelinye icala, iDeVry ibonelela ngezifundo kubafundi abaphishekela ukuhlawula iindleko kunye neenkqubo zokufaka iikhowudi. Malunga neepesenti ezingama-91 zabafundi bafumana uncedo lwezemali kwiDyunivesithi yaseDeVry.
IYunivesithi yaseHerzing yiyunivesithi yabucala enekomkhulu layo eMilwaukee Wisconsin kwaye ineekhampasi ezininzi eUnited States.
Iyunivesithi ibonelela ngeenkqubo zokuhlawula kunye nezokwenza ikhowudi kwi-Intanethi. IYunivesithi yaseHerzing ibonelela ngenkqubo ngeendlela ezimbini (inkqubo yediploma kunye nesidanga kunye nenkqubo yesidanga sokuqala). Inkqubo yediploma inokugqitywa kwisithuba seenyanga ezilishumi elinambini (12) kwaye ilungiselela abafundi ukuba bangene emsebenzini ngokukhawuleza. Abafundi banokungena kwinkqubo yokunxibelelana okanye ye-bachelor's degree ukuze bafumane imfundo ebanzi ebaleni.
Amanani abonisa ukuba malunga 97 ekhulwini yabafundi kwiziko bafumana uncedo lwezemali.
Ukuba awukwazi ukungena nakweyiphi na intlawulo yezonyango ekwi-intanethi kunye nezikolo zokufaka iikhowudi ezibonelela ngoncedo lwezezimali, unokukhetha izikolo ezibonelela ngeentlawulo zonyango kwi-Intanethi kunye neenkqubo zokufaka iikhowudi ngexabiso elifikelelekayo.
Ukuhlawulwa kwezonyango kunye nokufaka iikhowudi kwiikhompyuter kubiza imali encinci kwezi zikolo. Apha ngezantsi zizikolo ezibonelela ngexabiso eliphantsi lonyango kunye neekhowudi kwiikhompyuter:
Ikholeji yokuwa kweNgcali yeOconeeOFTCyikholeji yoluntu yoluntu esekwe kwi-2010. Iikhampasi zayo eziphambili ziseSandersville naseDublin, eGeorgia.
I-OFTC ibonelela ngenkqubo yesatifikethi sokuhlawula ityala kwi-Intanethi. Le nkqubo ifuna iikhredithi ezingama-20 zesemester ukugqiba ngaphezulu kweesemester ezimbini. Ukuhlawulwa kwezonyango kunye neekhowudi kwiikhompyuter kubiza ixabiso elincinci kwi-OFTC.
Isifundo: $ 2,662
KwiKholeji yaseTexas eseMbindini (I-CTC) yikholeji yasekuhlaleni e-Killeen, eTexas eyasekwa ngo-1965 ineekhampasi zamasebe kulo lonke elaseYurophu nakufakelo lomkhosi kulo lonke elase-US.
Ikholeji ibonelela ngaphezulu kweedigri ezingama-30 kwikhampasi kwaye ngaphezulu kweenkqubo zesatifikethi ezingama-45 zikwi-Intanethi. Phakathi kweenkqubo ezikwi-Intanethi kukuhlawula iindleko zonyango kunye neenkqubo zokufaka iikhowudi. Le nkqubo ifuna iiyure ezingama-340 zekhosi ukugqiba ngaphezulu kweesemester ezimbini ngaphantsi konyaka. Ukuhlawula iindleko zonyango kunye nokufaka iikhowudi kwi-Intanethi kuxabisa ixabiso eliphantsi kwi-CTC.
Isifundo: $ 3,090
Ikholeji yobuGcisa yaseOgeechee (OTC) yikholeji yobugcisa yoluntu e-Statesboro, Georgia eyasekwa ngo-1986.
I-OTC ibonelela ngaphezulu kwe-100 majors kokubini kwikhampasi nakwi-intanethi. Inkqubo yesatifikethi sokufaka iikhowudi kwezonyango iphakathi kwezijors ezikwi-Intanethi ezibonelelwa yi-OTC. Le nkqubo ilungiselela abafundi iimviwo zesatifikethi kwaye ifuna ubuncinci beeyure ezingama-24 zeesemester ukugqiba ngaphezulu kweesemester ezimbini.
Isifundo: $ 2,770
Iirhafu zonyango zasimahla kunye nezifundo zokufaka iikhowudi ezantsi zezabafundi abangenayo imali yokubhalisela ikhosi yokuhlawula kunye neyokwenza iikhowudi kunye nabafundi abangakwaziyo ukubhalisa kuso nasiphi na isikolo esinikezela ngeenkqubo zokuhlawula kunye neekhowudi ngoncedo lwemali.
Ukugqitywa ngempumelelo, izatifikethi zinikezelwa kwezinye iikhosi ngelixa kungekho zatifikethi zabanye.
Yiyo loo nto iirhafu zonyango zasimahla kunye nezifundo zokufaka iikhowudi zibandakanya:
Kule khosi, uya kufunda malunga nemisebenzi yekhowudi yonyango kunye nomthengisi wezonyango, ikhowudi yokuqonda isifo, inkqubo yokwenza iikhowudi, ukhetho lwezemfundo onalo, kunye nendlela yokufumana amava omsebenzi.
Le khosi yenzelwe abafundi abangaqinisekanga ngokungena kwicandelo lokuhlawula kunye nokhowudo kodwa bafuna imisebenzi ekude. Inikwa yi-PPMC Academy nge-Udemy kwaye kuthatha iyure ukuyigqiba kungekho siqinisekiso sikhutshiweyo.
Ukhuseleko kuKhathalelo lwezeMpilo lubonelelwa yiYunivesithi yase-Erasmus iRotterdam nge-Coursera yasimahla.
Kule khosi, uya kufunda ezentlalo kunye nezobuchwephesha kwimiba yokhuseleko olusetyenziswa ekugcineni izibhedlele zikhuselekile. Uya kufunda nangemiceli mngeni yokwenza ikhompyutha kwicandelo lokhathalelo lwempilo.
Ikhosi ibandakanya iimodyuli kubandakanya ukubiwa, ucoceko lwe-cyber, ukophula idatha, kunye nokuziphatha kwabantu. Kuya kukuthatha iiyure ezili-15 ukugqiba, emva koko uya kunikwa isatifikethi.
Nangona kunjalo, le khosi ayifundisi ngokuthe ngqo ukhathalelo lwempilo kunye nokuhlawula. Into elungileyo kukuba inokukunika ulwazi lwasemva lwe-IT olufunekayo ukuze uphumelele ebaleni.
Le khosi yasimahla ekwi-Intanethi ukuba ibonelelwa yiYouTube kunye noGqr Chrono.
Funda ukuBizwa kwezoNyango ngeYure enye kudibanisa isifundo sevidiyo esiya kukufundisa ukuba ungasisebenzisa njani isicelo solawulo lwengeniso uApollo kunye noApollo + ukwenza iinkqubo zokuhlawula zigqibelele. Ngokubhalisela le khosi, uya kuba nethuba lokufikelela kubhatala kaGqirha uChrono kunye neqonga leerekhodi zonyango ukuze ufumane amava ngakumbi.
Le khosi yevidiyo ithatha iyure enye ukuyigqiba kwaye akukho siqinisekiso sinikezelwayo emva kokugqiba ikhosi.
Kule meko, uya kukwazi ukuhlawula iindleko zonyango kunye nokwenza iikhowudi kwiikhompyuter kunye neendleko zazo. Ezi zifundo zibonelelwa ngamaziko ahloniphekileyo kwi-intanethi.
Ke ngoko, ukuhlawula iindleko zonyango kunye nokwenza iikhowudi kwi-Intanethi kubonelelwa ngu:
Ikholeji yaseRochester yoLuntu kunye neKholeji yobuGcisa
KwiKholeji yaseTexas eseMbindini (I-CTC) yikholeji yoluntu e-Killeen, eTexas eyasekwa ngo-1965 ineekhampasi zamasebe kulo lonke elaseYurophu nakufakelo lomkhosi kulo lonke elaseMelika.
I-CTC ibonelela ngenkqubo ye-AAS ekwi-Intanethi ekuhlawuleni iindleko zonyango kunye nekhowudi. Inkqubo inezifundo zesigama sonyango, i-anatomy kunye ne-physiology, kunye ne-pathophysiology. Ezi zifundo zinika abafundi ulwazi kwicandelo lezonyango. Ukongeza, le nkqubo iphonononga iikhowudi kunye neenkqubo zokuhlela, i-inshurensi, kunye nesoftware ethile. Abafundi bathatha iiklasi ngesiNgesi, ubuntu okanye ubugcisa obuhle, kunye nesayensi yoluntu.
Ukuhlawula iindleko zonyango kunye nokufaka iikhowudi kwiikhosi ezikwi-Intanethi $3,090 kwi-CTC.
ICentral Texas College ibambe ukuvunywa kuMbutho waseMzantsi weeKholeji kunye neKhomishini yeZikolo kwiikholeji.
Ikholeji yaseNyakatho-ntshona yezobuGcisa (NTC) yikholeji yoluntu yezobugcisa eBemidji, Minnesota, United States eyasekwa ngo-1965.
Eliziko libonelela ngenkqubo yokufaka iikhowudi kwikhredithi engama-60 kokubini kumntu nakwi-intanethi ngokupheleleyo. Le nkqubo ilungiselela abafundi ukuba babe nezakhono zokufaka iikhowudi kwezonyango kwaye basebenze ngeendlela ezahlukeneyo zononophelo lwempilo.
Ubambiswano lwe-NTC kunye neYunivesithi yaseMayville State ivumela abafundi bayo ukuba badlulisele kuwo onke ama-60 e-AAS iikhredithi zabo kwi-Bachelor's of Art okanye iBachelor of Science (BAS) kwi-Intanethi kulawulo lweshishini.
Ukuhlawula iindleko zonyango kunye nokufaka iikhowudi kwiikhosi ezikwi-Intanethi $5,654 kwi-NTC.
Ikholeji yezobuGcisa yaseNyakatho ntshona ivunyiwe yiKhomishini yokuFunda ePhakamileyo.
UMmandla woLuntu waseMinnesota kunye neKholeji yobuGcisa (M Stateluluntu loluntu kunye nekholeji yezobugcisa eyasekwa ngonyaka ka-2003. Ineekhampasi ezininzi eMinnesota.
Iziko libonelela ngenkqubo ye-AAS ekwi-Intanethi ye-AAS kwi-Technology Information / Coding. Nangona kunjalo, abafundi baya kucelwa ukuba bangene kwi-internship ngexesha lenkqubo.
Ngelixa bafunda kwi-Intanethi, abafundi banokufikelela kwilayibrari ye-elektroniki, ukucebisa, ukucebisa kunye nokufundisa. Oku kuyabanceda ukuba bafumane amava amava kwiinkqubo zokufaka iikhowudi kwezonyango.
Ngobambiswano luka-M State kunye neeyunivesithi ezininzi, izidanga ze-AAS zinokudlulisela kwinkqubo ye-bachelor kulawulo lolwazi lwezempilo okanye kulawulo lweenkonzo zempilo.
Ukuhlawula iindleko zonyango kunye nokufaka iikhowudi kwiikhosi ezikwi-Intanethi $5,560 kwi-M State.
UMmandla woLuntu waseMinnesota kunye neKholeji yobuGcisa ibambe ukuvunywa kwiKhomishini yokuFunda ePhakamileyo. Inkqubo yeziko le-HIT ivunyiwe yiKhomishini yoQinisekiso lweeNkcukacha zezeMpilo kunye neMfundo yoLawulo loLwazi.
ILaramie County Community College yikholeji yoluntu yoluntu eLaramie County, eWyoming eyasekwa ngo-1968.
I-LCCC ibonelela ngenkqubo esebenzayo ngokupheleleyo ye-63-ngetyala ye-AAS kwitekhnoloji yolwazi lwezempilo kunye nolawulo lolwazi. Inkqubo ineziqinisekiso ezintathu eziphambili.
Nje ukuba abafundi bapase isemester yokuqala, baya kufumana idiploma kwizinto eziyimfuneko kwiofisi yezonyango kwaye esi satifikethi sinokubenza bakwazi ukusebenza kwiofisi yezonyango ngelixa begqibezela inkqubo ye-HIT. Ukugqitywa kweesemester ezimbini ezilandelayo kuya kulungela abafundi ukuba bafumane isatifikethi kwiikhowudi zamabango ezonyango. Abafundi baya kunikwa isidanga se-AAS xa beyigqiba le nkqubo kwiminyaka emibini.
Eliziko ligcina ukuvunywa kwiKhomishini yokuFunda ePhakamileyo yoMbutho waseNyakatho weeKholeji kunye neZikolo.
IYunivesithi yaseKeizer yiyunivesithi yabucala eWest Palm Beach, eFlorida eyasekwa ngonyaka we-1977. Eyona khampasi yayo iseFort Lauderdale, eFlorida.
UKeizer ubonelela abafundi ngedigri ye-AS kulawulo lwezonyango kunye nokufaka iikhowudi kwi-Intanethi nakumntu ophakathi eyunivesithi eFlorida. Le nkqubo ilawulwa kokubini kwi IsiNgesi kunye neelwimi zeSpanish.
Abafundi bathatha izifundo kunye nezinto ezenziwayo ezibanceda ukuba bafumane ulwazi kunye nezakhono ezifunekayo zokuhlawula amatyala kunye nokwenza iikhowudi kunye nolawulo lwezempilo.
Ikholeji yoLuntu yaseGuilford (I-GTCCyikholeji yoluntu yoluntu kwiPiedmont Triad yaseNorth Carolina eyasekwa ngo-1958.
I-GTCC ibonelela ngenkqubo ye-AAS kulawulo lweofisi yezonyango kokubini kwi-Intanethi nakwiikhampasi. Abafundi banikwa uqeqesho olunzulu kwiinkqubo ezithile zekhowudi esemgangathweni kunye nolawulo lweofisi.
IKholeji yobuGcisa boLuntu yaseGuilford ivunyiwe nguMbutho waseMzantsi weeKholeji kunye neKhomishini yeZikolo kwiikholeji.
Uluntu lwaseHazard kunye neKholeji yobuGcisa (I-HCTCyikholeji yoluntu eHazard, eKentucky eyasekwa ngo-1968.
I-HCTC ibonelela ngenkqubo ye-AAS kubuchwephesha bolwazi lwezonyango kwi-intanethi nakwiikhampasi. Abafundi banokukhetha ukugxila kwikhowudi yezonyango phantsi kwale nkqubo. Bafumana izakhono kunye nolwazi olufunekayo lokungena kwicandelo lokhathalelo lwempilo njengeengcali ezixhasayo zonyango. Kuthatha iminyaka emibini ukugqiba le nkqubo.
Ikholeji yaseNorthland yoLuntu kunye nezoBugcisa luluntu kunye nekholeji yezobugcisa eMinnesota, eUnited States.
Le kholeji yeminyaka emibini inikezela ngenkqubo ye-AAS ekwi-Intanethi enamakhredithi angama-60. Inkqubo ilungiselela abafundi iimviwo zokufaka iikhowudi kuzwelonke. Ukongeza, abafundi bafumana ulwazi olusebenzayo lokulawulwa kwengcaciso yezempilo.
Ikholeji yaseNorthland yoLuntu kunye nezoBugcisa ivunyiwe yiKhomishini yokuFunda ePhakamileyo.
KwiKholeji yoLuntu lweMetropolitan (Metro or MCC) yikholeji yoluntu yoluntu e-Omaha, eNebraska eyasekwa ngo-1971.
IMetro ibonelela ngeenkqubo ze-AAS zolawulo lweenkcukacha ngetyala le-100.5. Abafundi be-MCC bathatha iikhosi zolawulo lwezempilo kwaye benze i-internship. Baye bathabathe ukhetho lokuhlawula kunye nekhowudi yenkqubo kwaye ibeka ugxininiso kwi-inshurensi, kwi-pharmacology nakwiinkqubo zezifo.
Kumazantsi-ntshona eWisconsin technical College (Ubugcisa beSouthwest) yikholeji yezobugcisa eFennimore, eWisconsin eyasekwa ngo-1967.
Eliziko libonelela abafundi ngenkqubo yesidanga sokudibana kwitekhnoloji yolwazi lwezempilo kwi-Intanethi ngaphandle kweeprakhtikhali zomsebenzi.
Le nkqubo inqumleza iisemesters ezintlanu kwaye ilungiselela abafundi ukuba basebenze kwinqanaba lokungena kwimisebenzi emininzi yolawulo kwezonyango kubandakanya ukuhlawula kunye nokufaka iikhowudi. Abafundi baya kuthatha iikhosi kubandakanya ukufaka iikhowudi, amanani, ulwazi lwedijithali kunye nezifundo ezahlukeneyo.
Uluntu lwaseRochester kunye neKholeji yobuGcisa (I-RCTCyikholeji yoluntu yoluntu eRochester, eMinnesota eyasekwa ngo-1915.
Ikholeji inikezela ngenkqubo yetekhnoloji yolwazi ngetyala ye-AAS engama-64. Ngale nkqubo, abafundi banikwa iikhosi zonyango kunye nezolawulo kwaye ezi zifundo zilungiselela ukuba bathathe uviwo lukazwelonke loMbutho woLawulo loLwazi lwezeMpilo eMelika. Nje ukuba baphumelele uviwo, bafumana ubuchwephesha obuchaziweyo bobuchwephesha bolwazi.
Abaphumeleleyo kwinkqubo ye-AAS banokuhambisa onke amakhredithi kwiikholeji zeminyaka emine. Inkqubo yetekhnoloji yolwazi lwempilo i-AAS ivunywa yiKhomishini yoQinisekiso lweeNkcukacha zezeMpilo kunye neMfundo yoLawulo loLwazi.
IHighland Community College yikholeji yoluntu yoluntu eseHighland, eKansas eyasekwa ngo-1858.
I-HCC ibonelela ngenkqubo ye-65-ngetyala ye-AAS kwinkqubo yokufaka iikhowudi kwezonyango kwi-Intanethi.
Abafundi banokugqibezela i-HCC's 65-ikhredithi yonyango yokufaka iikhowudi kwiminyaka emibini yobhaliso ngokusisigxina. Isiseko seekhosi zoqeqesho lomsebenzi ezilungiselela abafundi ukuba bathathe isiQinisekiso sokuDibanisa iikhowudi kunye noviwo lweNgcali lweKhowudi.
Imfuno yokuhanjiswa kunxibelelwano, ubuntu, kunye nesayensi yezentlalo yakha izakhono ezithambileyo ezifanelekileyo kwimisebenzi yolawulo lonyango. Abafundi bafunda ngokupheleleyo kwi-intanethi, ngaphandle kwelitye lembombo. Ukuziqhelanisa, abafundi bazibandakanya kuqeqesho lweklinikhi kwindawo evunyelweyo yokufaka iikhowudi.
IKholeji yoLuntu oluPhakamileyo ivunyiwe yiKhomishini yokuFunda ePhakamileyo.
Ikholeji yase-Indian Hills Community (IHCCyikholeji yoluntu yoluntu eIowa eyasekwa ngo-1966.
IHCC ibonelela ngenkqubo ye-AAS kwitekhnoloji yolwazi lwezempilo (HIT) kwi-Intanethi ngokupheleleyo. Inkqubo iqulethe ikharityhulam kubandakanya ukuhlawulwa kwezonyango kunye nekhowudi, isoftware yolawulo lwezempilo, ukukhuphela, njl. Kuthatha malunga neshumi elinanye leenyanga (21) ukugqiba inkqubo.
Inkqubo ivumela abafundi ukuba benze izinto ezimbini eziphambili ngokubanika ithuba lokufumana isidanga se-AA esinokudluliselwa kwiiyunivesithi.
Iikhosi zase-Hillsdale zeKholeji zasimahla kwi-Intanethi
Post Previous:IiSayithi ezingama-22 zamahhala zokuKhuphela ngaphandle koBhaliso
Okulandelayo Post:Izikolo ezi-15 eziBalaseleyo zoBunjineli boMbane kwiHlabathi liphela
UCaroline Savoy uthi:
April 2, 2022 kwi 2: 40 am
Bonsoir j'aimerais savoir s'il of unformation ou/et cours, Certificate etc...
Galela i-faturation médicale et codeage
Galela i-médecins specialist.
I-Au Québec, eKhanada
En ligne préférablement
Iphondo laseSinon laseQuébec
Mon nom Caroline Savoy
Pingback: 13 Izikolo eziPhezulu zeZonyango eziFundisa simahla i-2021